Xildhibaano si kulul uga hadlay Ciidamada Itoobiyaanka ee la geeyey Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaano si kulul uga hadlay Ciidamada Itoobiyaanka ee la geeyey Dhuusamareeb
Ardaan Yare 30 November 2019
Shalay waxaa magalada Dhuusamareeb ee Cassimadda Galmudug la geeyey Ciidamo ka socda Dowladda Itoobiya,kuwaas oo aan qeyb ka aheyn Amisom,waxaana taasi ay dood ka dhex abuurtay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan ahna Musharx Madaxweynaha Galmudug C/raxmaan Odawaa ayaa sheegay in Madaxweyne farmaajo waxyaabihii ololaha doorashada uu ku galay ay qeyb ka aheyd in uu wax ka qabanayo faragelinta Itoobiya ee Arrimaha Somalia,balse nasiib xumo uu isaga adeegsanayo.
” Madaxweynaha markii uu doorashada raadinaayay wax ugu wayn ee uu ku soo ganbaday waxa ay aheyd inuu wax ka qabanayo faragalinta Ethopia ay Soomaliya ku hayso.
Madaxweynuhu maba daahin ee markuu xilka qabsadayba waxa uu si aan xishood laheyn u billaabay in uu dadka Soomaliyeed ku cabburiyo ciidamada dowladda Ethopia” ayuu yiri Musharax Xildhibaan Maxamed Xuseen Odawaa.
Dhinaca kale hadalka Xildhibaan Odawaa waxaa kasoo horjeesta isla markaana khilaafay Xildhibaan Cabdi Xakiin Macalin oo sidoo kale xoghayaha Xisbiga Himilo Qaran,waxana uu sheegay inaysan jirin Ciidamo Itoobiyan ah oo la geeyey Dhuusamareeb,balse ay horay u joogeen.
”Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Galmudug la wadaago inaaney waxba ka jirin wararka lagu sheegay in Dhuusamareeb la geeyay Ciidama Itoobiyaan ah oo aan AMISOM ka tirsaneyn”ayuu yiri Xildhibaan C/xakiin Maalin.
Musharixiinta Madaxweynaha Galmudug qaarkood ayaa waxaa ay qabaan walaac farabadan maadaama sanad ka hor Dowladda oo adeegsaneyso Ciidamo Itoobiyan ah ay Baydhabo kasoo xireen Muqtaar Roobow oo ahaa musharax Madaxweynahs Koonfur Galbeed.
Guddiga doorashooyinka Somaliland oo Guddoomiye doortay
Somali villagers clash with Al Shabaab, six killed